विश्वकप क्रिकेट : भारत र न्युजिल्याण्ड भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? - विश्वकप क्रिकेट : भारत र न्युजिल्याण्ड भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
विश्वकप क्रिकेट : भारत र न्युजिल्याण्ड भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
२०७6, २५ असार, 08:07:48 AM
एजेन्सी । आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा बर्षाले प्रभावित बनेको पहिलो सेमिफाइनलको भारत र न्युजिल्याडबीचको बाँकी खेल आज ‘बुधबार’ हुने भएको छ ।
बर्षाका कारण ४६ दशमवल १ ओभरमा रोकिएको खेल ‘रिजर्व डे’ का अनुसार आज खेलाउन लागिएको हो । न्युजिल्याण्डले ४६ दशमलव १ ओभरबाट बाँकी खेल खेल्नेछ ।
म्यानचेष्टरको ओल्डट्राफोर्डमा करिब साढे चार घण्टा बर्षा भएपछि न्युजिल्याण्डको ईनिङ्स पुरा गर्न पाएन । खेल रोकिनु अघि न्युजिल्याण्डले ४६ दशमलव १ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २ सय ११ रन बनाएको थियो ।
बर्षा नरोकिएपछि अम्पायरले बाँकी खेल रिजर्व डे अर्थात आज हुने निर्णय गरेका थिए । न्युजिल्याण्डले ४६ दशमलव १ ओभरमा रहेर ब्याटिङ गर्नेछ ।
म्यानचेष्टरमा आज समेत ६५ प्रतिशत बर्षाको सम्भावना छ । खेल हुन नसकेको अवस्थामा भारत अंकका आधारमा फाईनल पुग्नेछ ।
ओल्ड ट्राफोर्डमा वर्षाले खेल रोकिनु अघि पहिले ब्याटिङ गरिरहेको न्युजिल्याण्डले ४६ ओभर १ बलमा ५ विकेट गुमाएर २११ रन बनाएको थियो ।
न्युजिल्याण्डका रोस टेलर ६७ रनमा अविजित रहेका छन् । यस्तै कप्तान केन विलियम्सन ६७ रन जोडेर आउट भए ।
टेलरले करियरको ५० औ अर्धशतक प्रहार गरेका छन् । यसअघि केन विलियम्स ६७ रन बनाएर युजभेन्द्र चहलको बलमा जडेजाबाट म्याच आउट भएका थिए । विलियम्सले टेलरसंग मिलेर तेस्रो विकेटका लागि ६५ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
भारतका जस्प्रित बुम्राह, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पाण्ड्या, रबिन्द्र जडेजा, युजभेन्द्र चहालले समान १र१ विकेट हात पारे । विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनल खेलिरहेका यी दुई राष्ट्रबीचको विजेताले फाइनलमा स्थान बनाउने छन् ।
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट : दाबेदार अष्ट्रेलिया, अभागी ईङ्ल्याण्ड कसले मार्ला आज बाजी
विश्वकप क्रिकेट : दुवै बलिया प्रतिद्वन्दी भारत र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुदै !
विश्वकपमा न्युजिल्याण्ड र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुदै, पाकिस्तानलाई अन्तिम मौका !
विश्वकप क्रिकेट : बर्षाले भारत र न्युजिल्याण्डको खेल रद्व